प्रचण्ड ओली-प्रचण्डले गुजारे नेकपा एकीकरणको तेस्रो म्याद !
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: एक महिनाअघि (भदौ २६) सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार शुक्रबार (आज) सम्म सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने थियो ।
समय तोकेरै पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे तेस्रो पटक दिइएको म्याण्डेट ओली-प्रचण्डबाट फेरि उल्लङ्घन भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको दिन (बुधबार दिउँसो) देखि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सम्वाद रोकिएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली प्रहरी दिवसको उत्सवमा सहभागी भए भने प्रचण्डचाहिँ कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग सम्वादमा बसे । तर, पार्टी एकताको टुंगो लगाउने म्याद सकिने दिन यसबारे अध्यक्षद्वयवीच कुनै छलफल भएन ।
नेकपामा अब बन्दैन पोलिटब्यूरो !
एकीकरण भएको २८ महिनासम्म नटुंगिएको एकतालाई पूर्णता दिने स्थायी कमिटीको म्याद गुज्रे पनि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमबारे बहस हुने महत्वपूर्ण निकाय पोलिटब्यूरो गठन नगर्नेमा भने लगभग सहमति जुटेको छ ।
जबकि, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश र जिल्ला कमिटी बनिसकेकाले पोलिटब्यूरो गठनबारे नेकपा नेताहरुमा धेरै चासो देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुको अर्थ भएकले चासो देखिएको केन्द्रीय सदस्य अरुण नेपाल बताउँछन् ।
तर, स्रोतका अनुसार, दुई अध्यक्ष र महासचिव बीच पोलिटब्यूरो गठनबारे गृहकार्य शुरू नै भएको छैन । स्रोत भन्छ, ‘संभवतः नेकपामा पोलिटब्यूरो बन्ने छैन, पार्टीमा तीन तह (सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी) को संरचना बनिसकेकाले पोलिटब्यूरो जरुरी नभएको निष्कर्षमा दुई अध्यक्ष देखिन्छन् ।’
महासचिव बिष्णु पौडेल पनि पोलिटब्यूरोबारे निर्णय हुन सक्ने सम्भावना नरहेको संकेत गर्छन् । ‘पोलिटब्यूरो बन्ने वा नबन्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन, यसबारे छलफल गर्न बाँकी छ’, उनी भन्छन् ।
तर, गएको माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने पोलिटब्यूरो गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन एमालेका पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्य रहेका नेता नेपाल पोलिटब्यूरो नराख्ने तयारी विधान विपरीत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पोलिटब्यूरोको औचित्व छैन भन्नु विधान विपरीत तर्क हो, कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यस्तो तर्क हुनु हुन्न ।’
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल पोलिटब्यूरो नराख्ने कल्पना नै गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरू, सचिवालय विघटन हुनुपर्छ । सचिवालय पार्टीको कुनै पनि कमिटीबाट बनेको संरचना होइन ।’ आफैं बस्ने कमिटीको निर्णय आफैंले गर्ने भन्ने नहुने नेता भुसालको तर्क छ ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्यको एक तिहाइ सदस्य रहनेगरी पोलिटब्यूरो रहने प्रावधान नेकपामा छ । अर्थात्, १४९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो कपामा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य उर्मिला अर्याल, शीर्ष नेताहरुले पोलिटब्यूरो नबनाउनुपर्ने कारण दिएर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पोलिटब्यूरोको महत्व अहिले अझै धेरै छ । समाजवाद उन्मुख संविधानअनुसार पार्टीको कार्यक्रम तय गर्न पनि पोलिटब्यूरो जरुरी छ ।’
तहगत पार्टी प्रणालीको निर्माण गर्न र नेतृत्वको विकास गर्न पनि पोलिटब्यूरो रहनुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । ‘आफू अल्पमतमा पर्ने डर अथवा उक्त संरचनामा आफ्ना मान्छे नपर्ने भयले पोलिटव्युरो नै नबनाउने कुरा गर्नु हुन्न’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
झनै बढ्यो समस्या
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन स्थायी कमिटीकै निर्णय हो । जसअनुसार, एकता प्रक्रिया टुंग्याउने अरु विषय थाती राख्दै मन्त्री हेरफेरलाई ओली-प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखे र लगातारमा छलफलमा रहे । तर, बुधबार तीन मन्त्री थप र दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरसहित पुनर्गठनले भने ओली-प्रचण्डको सम्वाद प्रभावित बनेको छ ।
एकता प्रक्रिया टुंग्याउने स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार, काम हुन नसकेकोमा स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा सहमत छन् । ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र असोज २९ को अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशिका) बमोजिम तल्ला कमिटीहरु सक्रिय भयो । तर, एकताको सन्देश माथिबाटै जानुपर्छ, त्यस्तो सन्देश जान सकेको छैन’, उनी भन्छन् ।
२०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर भाग लिएको एमाले-माओवादी प्राप्त मत परिणामबाट उत्साहित बन्दै पार्टी एकताकै निष्कर्षमा पुग्यो । प्रदेश र संघमा ओली-प्रचण्ड बीच भागबण्डाका आधारमा सरकार बन्यो । २०७५ जेठ ३ मा त पार्टी एकीकरण गरी नेकपा जन्मियो । पार्टी एकता घोषणा भइरहँदा तीन महिनाभित्र एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने घोषणा गरिएको थियो ।
तर, ओली र प्रचण्ड नेकपामा तेस्रो खेमाको नेतृत्व गर्ने jरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबारे गम्भीर देखिएनन् । ‘एकता प्रक्रिया टुंग्याइरहँदा दुई अध्यक्ष मिलेपछि अरू कोही होइन भन्नेजस्तो सोच राखियो । यसैबाट एकता प्रक्रियामा विवाद भयो’, नेता नेपाल निकट एक स्थायी कमिटीका नेता भन्छन् ।
आफ्ना निकटलाई जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा किनारामा धकेलिएपछि नेता नेपालले संसदमै उभिएर सरकारको प्रभावकारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । तर, भागबण्डामा आधारित ओली-प्रचण्ड बीचको सहमतीय यात्रामा पनि खटपटी देखियो ।
विशेष गरी कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएपछि अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनेबारे नेकपामा लामै समय विवाद भयो । यसपछि पहिलेबाटै ओलीसँग रुष्ट देखिएका नेपाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग प्रचण्डको गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धनको जगमा २०७६ माघ १५-१९ मा पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । बैठकले फेरि १५ दिनभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने निर्णय गर्‍यो ।
पहिले ओली-प्रचण्ड गठबन्धनबाट नेता नेपाल किनारा लागेका थिए, यसपटक ओली चरम अल्पमतमा परे । ‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी बीचको सहमतिबाट पार्टी एकता भएपनि नेकपामा बहुमतको खेल शुरु हुनु नै दुखद् थियो, त्यसले धेरै हदसम्म एकता प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो’, ओलीनिकट एक नेता भन्छन् ।